मेक्सिकोमाथिको जितसँगै ब्राजिलले बनायो यस्ता रेकर्ड, नेइमारले पछि पारे मेसी र रोनाल्डोलाई - Everest Dainik - News from Nepal
मस्को । रसियामा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको पाँचौं प्री-क्वारफाइनलमा मेक्सिकोलाई हराउँदै ब्राजिल विजयी भएको छ । यो सँगै ब्राजिलले विश्वकपमा सबैभन्दा बढि गोल गर्ने टिमको रेकर्ड बनाएको छ । १९३० देखि शुरु भएको विश्वकपमा हालसम्म २२८ गोल गरिसकेको छ । ब्राजिलपछि सबैभन्दा बढि गोल गर्ने टिम जर्मनी छ । उसले २२६ गोल बनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप फुटबलः तेस्रो स्थानका लागि बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड केही बेरमा भिड्दै !
मेक्सिकोले हिजो पनि इतिहासमा नयाँ रेकर्ड बनाउन सकेन । उसले लगातार प्री-क्वाटरफाइनलमा ७ पटक हार बेहोरेको छ । हिजो भएको पहिलो खेलको पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको थियो । खेलको दोस्रो हाफको ५१औं मिनेटमा गोल गर्दै ब्राजिलका स्ट्राइकर नेइमारले आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । नेइमारको यो ७५औं अन्तर्राष्ट्रिय र जारी विश्वकपमा दोस्रो गोल हो । ब्राजिलका लागि ८८औं मिनेटमा फर्मिनोले दोस्रो गोल गरे ।
याे पनि पढ्नुस मरिसकेर पनि बच्चा पाउनकै लागि ४ महिनासम्म बाँचिन यी महिला
दुई मिनेट अघिमात्र फिलिप काउटिन्होको स्थानमा मैदान छिरेका फिरमिनोले नेईमारले दिएको क्रसमा ट्यापिङ गर्दै गोल गरेका हुन् । ब्राजिलले अब क्वाटरफाइनलमा बेल्जियमसँग भिड्ने छ । ब्राजिल २००२ यता विश्वकप जित्ने प्रयाशमा छ।
नेइमार, मेसी-रोनाल्डोभन्दा अगाडी
ब्राजिलका स्ट्राइकर नेइमारको हिजोको खेलसँगै जारी विश्वकपमा दोस्रो गोल हो । साथै, अहिलेसम्म उनले विश्वकमा अवधिभर ६ गोल गरिसकेका छन् । ६ गर्न नेइमारले अर्जेन्टिनाका मेसी र पोर्चुगलका रोनाल्डोभन्दा कम सट प्रहार गरे । मेसीले जारी विश्वकपमा ६७ र रोनाल्डोले ७४ शट लगाएका थिए । जबकि नेइमारले भने केवल ३८ शटमै ६ गोल गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप फुटबलः आज पनि दुई खेल, कुन-कुन टिमबीच हुँदैछ भिडन्त ?
ट्याग्स: Brazil, Fifa world cup 2018